सात दिनमा ६ बलात्कार, अधिकांश आफन्तबाटै – तहल्काखबर
हल्दिबारी गोल्डकपमा आज आयोजक र ब्रदर्श युवाइटेड भिड्दै
चर्च व्वाइज यूनाइटेड हल्दिबारी गोल्डकपको फाइनलमा
बिजुली सर्ट हुँदा परालको जाकमा आगलागी
तीन करोड रुपैयाँको निःशुल्क प्राथमिक उपचार तालिममा योगदान गरेको उप्रेतीको दावी
विप्लव समूहकी महिला नेत्री रुपन्देहीबाट पक्राउ
अपराध पत्रपत्रिका समाचार समाज
सात दिनमा ६ बलात्कार, अधिकांश आफन्तबाटै
२०७५ भाद्र १७ गोपिन पोखरेल
बुटवल / एक साताभित्रै प्रदेश ५ मा आधा दर्जन बलात्कारका घटना सार्वजनिक भएका छन् । तीमध्ये तीन जना बालिका छन् । मंगलबार बाँकेको कोहलपुरमा पाँच वर्षीया बालिकामाथि काकाले बलात्कार गरेको मुद्दा प्रहरीकहाँ पुगेको खबर नसेलाउँदै शुक्रबार १३ वर्षीया बालिका आफ्नै हजुरबुवाबाट बलात्कृत भएकी छन् ।
कोहलपुर नगरपालिका–३ निवासी ७० बर्से वृद्धले नातिनीलाई तीन वर्षदेखि यौन शोषण गर्दै आइरहेको रहस्य खुलेको छ । इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुरका सूचना अधिकारी मानबहादुर बिसीका अनुसार पीडित बालिकाले शुक्रबार प्रहरीमा हजुरबुवाविरुद्व उजुरी दिएकी छन् ।
आरोपी वृद्धलाई शुक्रबारै पक्राउ गरी प्रहरीले आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएको छ । शुक्रबारै पीडित बालिकाको स्वास्थ्य परीक्षण गराइएको प्रहरीले जनाएको छ । आरोपीलाई पक्राउ गरिए पनि शनिबार बिदा भएकाले आइतबार मात्रै जाहेरी दर्ता गरिने कोहलपुर प्रहरीले जनाएको छ ।
त्यस्तै मंगलबार कोहलपुर नगरपालिका–३ मैटहवामा पाँच वर्षीया बालिका बलात्कृत भएकी थिइन् । नाताले काका पर्ने भारत उत्तरप्रदेश डिन्नी रहेली घर भई कोहलपुर–४ बस्ने १५ बर्से किशोर हरूण खाँले घर पु¥याइदिने भन्दै आफ्नो कोठामा लगेर जबर्जस्ती करणी गरेको आरोपमा उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
बुधबार पनि रूपन्देहीमा ६ वर्षीया बालिका बलात्कारको सिकार भइन् । कञ्चन गाउँपालिकाकी उनलाई २० बर्से विकल भन्ने खेमबहादुर पुनले बलात्कार गरेका थिए । मावली घर आएकी उनलाई राति चकलेट दिन्छु भन्दै उनले बलात्कार गरेका हुन् ।
तीन दिनअघि बुटवलको ज्ञानपुञ्ज विद्यालयका प्रिन्सिपल तोयाराम पौडेल यौनहिंसा आरोपमा पक्राउ परेका छन् । उनले विद्यालयको छात्रावासमै छात्रामाथि यौन दुव्र्यवहार गरेको आरोप छ ।
बिहीबार गुल्मी रजस्थलका ५६ बर्से धनबहादुर चुँदाराले ३५ वर्षीया एक महिलामाथि बलात्कार गरेका थिए । खेतमा पानी लगाएर फर्किंदै गरेकी उनीमाथि उक्त घटना भएको हो ।
रोल्पामा एक सातामा बलात्कारका दुई मुद्दा प्रहरीकहाँ पुगेका छन् । शुक्रबार मात्रै साढे ६ वर्षीय बालिकामाथि भएको बलात्कारको मुद्दा प्रहरीकहाँ आएको हो । रोल्पा नगरपालिकाभित्रकै एक बालिकालाई उनको नाताभित्रैका १५ वर्षीय किशोरले बलात्कार गरेको अभिभावकले जाहेरीमा लेखेका छन् ।
छोरीमाथि जबरजस्ती भएको भन्दै बालिकाका परिवारले शुक्रबार प्रहरीमा उजुरी दिएको जिल्ला प्रहरी प्रमुख एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक दीपक खड्काले बताए । ११ दिनअघि सो घटना भएको परिवारले जनाएका छन् ।
छोरी बिरामी भएपछि परिवारले उपचारका लागि स्वास्थ्य संस्थामा लगेका र परीक्षणपश्चात् स्वास्थ्यकर्मीले करणी भएको पुष्टि गरेका हुन् । बालिकालाई सोधपुछ गर्दा आमाको भदै नाता पर्ने किशोरले आफूमाथि करणी गरेको बताएकी छन् ।
आफूमाथि जबरजस्ती करणी भएको भन्नेसमेत थाहा नपाएकी बालिकाले शारीरिक पीडाबारे अभिभावकसँग खुलाएकी थिइनन् । खाना नखाने, टोलाउने र ज्वरो आउन थालेपछि अभिभावकले उपचारार्थ स्वास्थ्य संस्थामा लगेका थिए ।
रोल्पा जिल्ला प्रहरी प्रमुख खड्काका अनुसार आरोपित किशोरलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाइएको छ । ‘पीडित परिवारको जाहेरीका आधारमा किशोरलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान कार्य अघि बढाएका छौं’, खड्काले भने, ‘बालिकालाई स्वास्थ्य परीक्षणका लागि जिल्ला अस्पताल पठाएका छौं, डाक्टरको रिपोर्ट आएको छैन ।’
पक्राउ परेका किशोरलाई आइतबार अदालतमा पेस गरिने प्रहरीले बताएको छ । रोल्पामा बितेका चार वर्षमा जबर्जस्ती करणी र यसअन्तर्गत २७ घटना भएका छन् ।
बोक्सी भन्दै सासूको हत्या
आफूलाई बोक्सी लागेको भन्दै दाङमा बुहारीले सासूको हत्या गरेकी छन् । दंगीशरण गाउँपालिका–३ की टन्की रावतले ६९ वर्षीया सासू खोपी रावतको हत्या गरेकी हुन् ।
सासूले बोक्सी लगाएकै कारण आफू पटक पटक बिरामी परेको भन्दै सल्यानमा लगेर हत्या गरेको टन्कीले बयान दिएकी छन् । भदौ २ गते सल्यान लगेको र ५ गते हत्या गरेको उनले बयानमा उल्लेख गरेकी हुन् । इलाका प्रहरी कार्यालयले टन्कीलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान सुरु गरेको छ । अन्नपूर्णपोष्ट
← काठमाडाैं-तराई द्रुतमार्गको डीपीआर : कम्पनी छनोट अन्तिम चरणमा
एसीसी एसिया कप छनोटः अाज नेपालले सिंगापुरलाई जित्नैपर्ने दवाब →
डा. सुरेश आचार्य विक्रम संवत्को वर्ष २०७५ सकिएको छ । दुनियाँमा कसैले रोक्न नसक्ने समयमात्र हो । कोही जन्मे पनि
सांस्कृतिक संवाहक पृथ्वीनाराण शाह
२०७५ पुष २७ तहल्का खबर Comments Off on सांस्कृतिक संवाहक पृथ्वीनाराण शाह
लेख रचना विचार
संस्कृतिमा विकृतिले भरिएको ‘तिहार पर्व’
२०७५ मंसिर २६ तहल्का खबर Comments Off on संस्कृतिमा विकृतिले भरिएको ‘तिहार पर्व’
श्रीमान–श्रीमतीबीच हुने यौन सम्पर्कले कस्लाई बढि यौन आनन्द भएको होला ? पुरुष यौन साथीलाई रमाइलो हुँदा आफूलाई दुई गुणा रमाइलो
२०७५ चैत्र २४ तहल्का खबर Comments Off on वैज्ञानिकले पत्ता लगाए किस गर्नुका यस्ता फाइदाहरु
गोपिन पोखरेल- विर्तामोड / चिया मजदुरका प्रदेशस्तरीय तीनवटै श्रमिक संगठनले आज प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्
रिना मृत्यु प्रकरणःबस्नेतलाई बारम्बार फोन गर्ने को थिए ?
२०७६ बैशाख ८ तहल्का खबर Comments Off on रिना मृत्यु प्रकरणःबस्नेतलाई बारम्बार फोन गर्ने को थिए ?
पत्रपत्रिका प्रदेश समाचार
किर्ते उपभोक्ता समिति प्रकरण : पूर्वसांसद यादव पक्राउ
२०७६ बैशाख ५ तहल्का खबर Comments Off on किर्ते उपभोक्ता समिति प्रकरण : पूर्वसांसद यादव पक्राउ
प्रदेश राजनीति समाचार
प्रदेशसभा सचिव नियुक्ति गर्न बनेको विधेयक पारित
२०७६ बैशाख ४ तहल्का खबर Comments Off on प्रदेशसभा सचिव नियुक्ति गर्न बनेको विधेयक पारित
प्रदेश राजनीति राष्ट्रिय समाचार
विप्लव समूहलाई मूलधारमा ल्याउने प्रयास भइरहेको छ : गृहमन्त्री
२०७६ बैशाख ४ तहल्का खबर Comments Off on विप्लव समूहलाई मूलधारमा ल्याउने प्रयास भइरहेको छ : गृहमन्त्री
सिलिन्डर लिक भएर आगलागी
२०७६ बैशाख ४ तहल्का खबर Comments Off on सिलिन्डर लिक भएर आगलागी
बिर्तामोड / सिम्रिक साकोसले आज बिर्तामोडमा आयोजना गरेको नयाँ शेयर सदस्यहरुलाई स्वागतसहित सदस्य शिक्षा तालिमका अवसरमा नारी सञ्चार गृहलाई २५
सहकारी दिवशको भव्य तयारी, दिवशमा सहकारी अभियन्ता र सञ्चारकर्मीलाई पुरस्कृत गरिने
२०७५ चैत्र १९ तहल्का खबर Comments Off on सहकारी दिवशको भव्य तयारी, दिवशमा सहकारी अभियन्ता र सञ्चारकर्मीलाई पुरस्कृत गरिने
साना किसान कृषि सहकारीको ग्रामिण भेगमा ठूलो काम
२०७५ चैत्र ५ तहल्का खबर Comments Off on साना किसान कृषि सहकारीको ग्रामिण भेगमा ठूलो काम
सतासी सहकारीको २२औं वार्षिकउत्सव सम्पन्न, २२ जना कर्मचारी र सदस्य सम्मानित
२०७५ फाल्गुन २१ तहल्का खबर Comments Off on सतासी सहकारीको २२औं वार्षिकउत्सव सम्पन्न, २२ जना कर्मचारी र सदस्य सम्मानित